महल बन्ने, सडक भासिने? - फोटो फिचर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सन्देश दुमरु काठमाडौं पुस २५
महानगरमा कतिसम्मको लापरवाहीपूर्ण ढङ्गमा निर्माणको काम हुन्छ भन्ने थाहा पाउन नक्साल भगवतीबहाल पुगे हुन्छ। सडक छेउमा बनाउन लागेको एउटा भव्य महलका लागि जग खन्दा सावधानि नअपनाएका कारण यहाँको सडक यसरी भत्क्यो कि, सवारी आवागमन नै ठप्प हुने स्थिति बन्यो।
करिब ४० फिट बाटो भासिएपछि अहिले प्रहरीले यो स्थान भएर चल्ने सवारी साधनलाई भगवतिबहाल र बालमन्दिरबाटै ड्राईभर्सन गरेको छ। महल बनाउँदा नक्सा पास गरे मात्र हुने हो कि अरु कुनै नियम र सहिंतामा पनि पालना गर्नु पर्छ?
प्रकाशित २५ पुस २०७३, सोमबार | 2017-01-09 17:34:22
साउन महिनाको अन्तिम सोमबार: पशुपतिमा बोलबमको रौनक (फोटोफिचर)
धार्मिक हिसाबले साउन महिना हिन्दू नारी र पुरुष दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। साउनमा महिलाहरु सोमबारे वर्त बस्ने गर्दछ। आजभोलि पुरुष पनि...
बिमस्टेक सम्मेलनका लागि तार व्यवस्थित गरिँदै (फोटो फिचर)
आगामी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा हुने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको तयारी अगाडि बढेको छ।
भक्तपुरको दत्तात्रयमा गठे मंगल जात्रा (फोटो फिचर)
आज गठे मंगल पर्व, भक्तपुरको दत्तात्रयमा धुमधामका साथ मनाइएको छ।
निसान खड्काको अन्त्येष्टि: अार्यघाटमा राेकिएनन् अाँसु (फाेटाे फिचर)
अाइतबार राति अपहरणमा परी हत्या गरिएका बालक निसान खड्काकाे पशुपति अार्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएकाे छ।
जोखिममा बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती (फोटो)
अबिरल वर्षासँगै बागमतीमा पानीको सतह बढेपछि काठमाडौंकाे बल्खुस्थित नदी किनारका बस्तीहरु जोखिममा परेका छन्।
लर्डसमा राजेश हमाल पनि क्रिकेट दर्शक (फोटो फिचर)
नेपालले क्रिकेटको विश्व प्रशिद्ध इंग्ल्याण्डको लर्डस मैदानमा अाइतबार एमसीसी र नेदरल्याण्ड्ससँग त्रिकोणात्मक टी-२० श्रृखंला खेलेको थियो।